Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Cabdi wali Gaas Oo Sheegay in Sool iyo Laascanood ay Soomaliland Ahayn Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 284
Cabdi wali Gaas Oo Sheegay in Sool iyo Laascanood ay Soomaliland Ahayn
C/weli Maxamed Cali Gaas, Madaxweynaha Puntland oo maanta khudbad ka jeediyay furitaanka Kalfadhiga Baarlamaanka Puntland ayaa ku dheeraaday ka hadalka colaadda ka aloosan Deegaanka Tukaraq ee Gobolka Sool.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in dalka uu maanta ku jiro dagaalo waaweyn oo ay ku soo qaadeen sida uu yiri xufulada Hargeysa, Al Shabaab iyo Daacish.
“Mudane-yaal dalkeenu wuxuu ku jiraa dagaalo waaweyn oo ay ku soo qaadeen xulufada Hargeysa, Al Shabaab iyo Daacish, isla-markaana waxaa difaac joogta ah ku jira dhammaan ciidamadeena kala duwan, ee u heelan ilaalinta dhulkooda iyo dadkooda, oo aan halkaan maanta bogaadin uga direyno dhammaanteen.” Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu ku nuux-nuuxsaday in ay maanta ku jiraan dagaal ka duwan kuwii ay horey u galeen, iyadoo uu xusay in dagaalkan uu saamayn ku leeyahay diinta, jiritaanka dalka iyo dowladnimada.
“Mudane-yaal maanta waxaan ku jirnaa dagaal, mana ahan dagaalkan la’inagu soo qaaday mid lamid ah kuwii aan horey u geli jirnay. Waa mid saamayn ku leh diinteena, dalkeena, jiritaankeena iyo dowladnimadeena. Waa dagaal dhaafay anshaxa suuban Soomaalinimada iyo jaarnimada Soomaalida lagu yaqiinay. Waa dagaal salka ku haya been, argagixiso iyo isir naceyb.” Ayuu yiri C/weli Maxamed Cali Gaas, Madaxweynaha Puntland.
Waxaa kaloo uu yiri “Mudane-yaal Gobolka Sool maaha meel ka wada dhaxeysa Somaliland iyo Puntland. Gobolka Sool maaha gobol aan la garanayn cidda iska leh, oo qolo walba markeeda sheeganayso. Gobolka Sool dhul iyo dadba waa reer Puntland, waana laga xorayn doonnaa cadowga dul hoganaya. Shacabka Puntland waxay dowladda u sheegeysaa inaad u hiilisaan walaalihiin reer Sool, lana garab istaagtaan naf iyo maalba, sidoo kale waxaad ogaataan abaalka aad maanta dhigataan inuu noqon doono keyd idin yaal kumanaanka sano ee soo socda.”
Isagoo eedeynaya Somaliland ayuu yiri “Wada hadal ayaan Federaal la gelayaa intaan Puntland soo weeraro, xuduud ayaan soo xirayaa, ictiraaf baan doonayaa. Muuse Biixi wuxuu ku doodayaa Ingiriis ayaa Gobolka Sool na siiyay, waxaan u sheegeynaa Ingiriis gobolkan malahan, wuxuu ahaa gumeysi maalmo joogay oo aan iska xoreynay, kumanaan Daraawiish ah iyo Soomaali kale ayaa dhiigooda u huray, naftoodana u hibeeyay si ay isaga xoreeyaan heeryadaas gumeysiga.”
Waxa uu intaa raaciyay “Hadaba Muuse Biixi waxaan leeyahay haddii Ingiriis uu dhul ku siinayo Laascaanood maaha London, Xudun maaha Birmingham, Taleex-na maaha Cardiff.”
C/weli Gaas ayaa ka dhawaajiyay in Puntland ay aqoonsan tahay xuduudii ay Dowladdii Dhexe u kala xadeysay Gobolada Sool & Togdheer, haddii wax ka khaldan uu jirana ay kala xaali doonaan cid kastoo samadoon ah.
“Ugu dambeentii Dowladda Puntland waxay aqoonsan tahay xuduudii ay Dowladdii Somaliya u kala sameysay Gobolada Togdheer & Sool, haddii ay wax ka khaldan yihiin waxaan kala hadleynaa cid kasta oo samadoon ah, laakiin Gobolada Sool & Nugaal dhexdooda ciddii wada hadal ka dooneysa, dee waxaan ku leeyahay af aadan lahayn aamus lama yiraahdo.” Ayuu yiri Madaxweyne Gaas.
Madaxweyne Farmaajo oo Booqday Xerada jeneral Gordon
Xeer ilaaliyaha Guud Oo Diignin U diray Ganacsatada Dhuxusha Dhoofisa